Diiwaanka Sacuudi Carabiya - Xuquuqda Aadanaha & Farshaxanka Fudud ee ∴ PixelHELPER Foundation
22 2016 karaa
Post Sticky By Oliver Bienkowski Posted in guud ahaan Permalink
Ololaha: Jooji Suuqa Ganacsiga!
Post Sticky By Oliver Bienkowski On 22. May 2016
Jooji Ololaha Ganacsiga Hubka
Sawir sawir ah ee maqaallada saxaafadda
Wargeysyada ka soo baxa raadiyaha iyo telefishanka
Qoyska Oetker waa diyaar
Inkastoo Bundeswehr ay u dhaqaaqeyso Suuriya si ay ula dagaallanto ISIS iyo adduunka ayaa ka baqaya weerarrada argagixisada ee suuqyada kirismaska, tayada jarmalka ayaa maalgelinaysa shirkadaha hubka. Recently, qaar ka mid ah saamileyda Dr. Ing. Agoosto Oetker KG ayaa ku lug leh iibka shirkadda ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH, oo shirkadahooda ganacsiga ka mid ah diyaaradaha Jarmalka ah. Warshadaha difaaca ayaa mararka qaar ah goob ganacsi oo adag. Inkasta oo suuqyada ay u badan tahay in la hubiyo ugu yaraan dhoofinta hubka badan iyo howlgallada Bundeswehr, laakiin ganacsiga ammaanka ee la maleynayo ayaa sidoo kale ah tiro badan oo dhiig ah.
Isticmaal farshaxanka iftiinka si aad u gubtaan ololka isgaadhsiinta
PixelHELPER ayaa ujeedadeedu ahayd in ay ka dhigto xilli xasilooni ah si ay u muujiso maalgashigan qoyska Oetker. Sidaas awgeed xilliga firaaqada ee xilliga fasaxyada ah ee xilliga fasaxa ah, marka la iibsanayo maaddooyinka loo yaqaan 'cookies' ee kirismaska ​​maahan fariin yar oo nabdoon oo hooseysa, Bienkowski ayaa bilaabay dibad-baxyo kala duwan. Tusaale ahaan, farshaxan iftiin ah ayaa saadaaliyey Dr. Calaamadda Oetker ee qaabka jilicsan iyo saxeexa "Kanonenfutter" ee shirkadda Dr. Oetker ee Bielefeld. Waxa laga yaabaa inay ahayd iftiin yar oo qura habeenkii Bielefeld, taas oo iftiimisay waddooyinka quruxda leh ee qurxinta leh, laakiin halkan waa wax badan oo ku saabsan dareenka warbaahinta. Iyo sida dhabta ah ee Bienkowski lagu tijaabiyey on Channel ee si fiican loo yaqaan ee YouTube wada jir ah ula Jörg Sprave a cannon barmaamij guri.
Dagaal sida arrin gaar ah
Iyo sidee ayay ufududayntu u dhacday dhamaan arrimahan? Dhammaan wixii ka dambeeyay, waxaa jiray war rasmi ah oo ka soo baxay shirkadda Bielefeld. "Maalgashadu waa arrin gaar ah oo ah laba xubnood oo qoyska ah mana laha wax shirkad ah. Oetker ", sida laga soo xigtay wargeyska Neue Westfälische Zeitung. Oo sidaas daraaddeed Bienkowski keenay shaqo joojinta soo socota ee reer Oetker si ay u gaaraan niyadooda. Su'aasha ah in ay tahay mulkiilaha shirkadda Dr. med. Oetker wuxuu ku hawlan yahay ganacsiyada hubka, waqtigaan wuxuu ahaa sonkorta macaan iyo gebi ahaanba aan dhadhamin by Berlin Boys Choir.
Niyad jab ma noqon kartaa mid ka yara badan baaski barafaysan?
Tani waa sida uu Rolf Zuckowski u arko "In der Weihnachtsbäckerei" si dhakhso ah u noqotay "Cilmi Biyaha". Caruurtu waxay waydiinayaan qoyska Oetker: "Meeday nacaybku?" Waxqabadka ficilka waxaa lagu soo bandhigaa farshaxanka Berlin ee hip hopka Vokalmatador. Laakiin ma aha oo kaliya marka la eego farsamada dhawaaqa iyo content, muuqaalka ayaa leh wax badan oo la soo bandhigo, dardargelintu waa run. Iyadoo wejiga doofaarka ee hore ee mitirka 1,45 sanduuq alwaax dheer. Xilligaan aan dhadhamin, ugu yaraan Richard Oetker waa inuu dhaafaa farxadda ganacsiga hubka leh. Kadib, dhammaadkaan 1976 waxaa la afduubay sanduuq caynkaas oo kale lagu qabtay. Afduubayaashu waxay lahaayeen maaskaro doofaar. Ficilku miyuu jilicsan yahay? Waana hubaal. Laakiin intee in le'eg ee isku darka ah ee aad diyaar u tahay inaad u baahato inaad iska illowdid taariikhdaadii hore oo aad maalgalisid heshiisyada hubka ee alaabadooda ku dhawaad ​​ku dhawaad ​​ku dhufteen 40 sano ka hor?
Waayo, stop degdeg ah ee hanta in Saudi Arabia pixels Gargaare la saadaaliyey in wada shaqeyn la qayladoodii Action ee dhoofinta - Jooji ganacsiga hubka, ku "Thanks ma taangiyada in Saudi Arabia" erayada on Chancellery Federaalka iyo safaarada Saudi Arabia.
Suudaan ayaa weli ka mid ah macaamiisha ugu muhiimsan ee shirkadaha difaaca Jarmalka. Qeybta hore ee 2015, hubka loo dhoofiyo qiimaha hubka ee 180 million euro ee Saudi Arabia waa la ansixiyay - keliya UK iyo Israel, waxaa jiray xitaa heshiisyo waaweyn.
Jarmalka waa horyaal yurub ah oo loo dhoofiyo hubka. Worldwide, waxay qaadataa kaalinta saddexaad ee Maraykanka iyo Ruushka. Iyada oo ogolaanshaha xukuumadda federaalka, hubka Jarmalka iyo hubka ayaa sidoo kale la siiyaa kali-talisnimada iyo maamul-goboleedyada sida Saudi Arabia. Taasi ma sii socon karto. Waxaan dooneynaa inaan joojino ganacsiga dhimashada.
Ololaha: Jooji Suuqa Ganacsiga! July 1st, 2019Oliver Bienkowski